Nsɛm A Afofor Tum Tse Ase | Akenkan & Nkyerɛkyerɛ
Nsɛm A Afofor Tum Tse Ase
1 Corinthfo 14:9
DZA ƆSƐ DƐ EYƐ: Boa w’etsiefo no ma wɔntse w’asɛm no ase.
Sũa w’asɛm no yie paa. Tse w’asɛntsir no ase yie paa mbrɛ ɔbɛyɛ a ibotum dze wankasa wo nsɛm akyerɛkyerɛ mu ma no mu aada hɔ.
Fa nsɛntɔw ntsiantsia na nsɛmfua a ne ntseasee nnyɛ dzen dzi dwuma. Ɔnnyɛ mfom dɛ edze nsɛntɔw atsentsen bedzi dwuma dze, naaso fa nsɛmfua nye nsɛntɔw ntsiantsia kyerɛkyerɛ nsɛntsitsir no mu.
Yi nsɛm afofor a no ho nnhia na obotum ama w’etsiefo no adwen etu afora anaa ɔbɛma nsɛm no ayɛ pii wɔ hɔn adwen mu no fi wo kasa no mu. Dɛ nkyɛ ebɛkã nsɛm akɛseakɛse ma wo nsɛm ayɛ woworann no, kã nsɛm a n’ase tse nnyɛ dzen mbom.
Kyerɛkyerɛ nsɛm bi a wonnyim no mu. Sɛ ɔbɛyɛ yie a, mma mmfa nsɛm bi a w’etsiefo no nnyim n’asekyerɛ nndzi dwuma. Sɛ no ho hia dɛ edze asɛm bi a wonnyim n’asekyerɛ, Bible mu nyimpa bi a wonnyim no, kwan a nna wɔfa do susu adze wɔ tsetseber mu anaa tsetse amambra bi a wonnyim dzi dwuma wɔ wo kasa no mu a, kyerɛkyerɛ mu.
Akenkan Na Nkyerɛkyerɛ​—Nsɛm A Afofor Tum Tse Ase